Huawei dia afaka nanamboatra ny Nexus | Androidsis
Huawei dia afaka nanao ny Nexus manaraka
El Rohy 6 tsy mbola nahavita famolahana teo amin'ny vahoaka io. Ny haben'ny efijery an'ny mpikambana farany amin'ny elanelan'ny finday avo lenta an'ny Google sy ny vidiny fanombohana tafahoatra, raha ampitahaintsika amin'ireo taranaka roa teo aloha dia nifarana tamin'ny fandanjana ny varotra an'ity fitaovana ity.
Efa ela no nahenoana tsaho momba ny Nexus vaovao isika. Ankehitriny, araka ny navoakan'ny vavahadin-tserasera GizmoChina, ny Huawei dia hanao ny iray amin'ireo Nexus vaovao.
Huawei no hiandraikitra ny famokarana ny Nexus manaraka
Ary ireo tsaho ireo dia milaza ny mety hisian'izany Mpanamboatra aziatika lasa mpiara-dia amin'i Google vaovao raha ny momba ny famokarana ny fitaovana Nexus vaovao.
Araka ny nanamarihana Kevin yang, iSuppli mavesatra, hatramin'ny nanamafisan'i Huawei izany tranga izany. Na dia tsy fantatra aza izay fitaovana lazain'izy ireo, raha smartphone smartphone na takelaka ho an'ny ekipan'ny Mountain View.
Ary i Yang dia nanamafy fa Huawei dia hamokatra fitaovana Nexus izay hahatratra ny tsena mandritra ity taona 2015 ity, raha LG dia hiverina amin'ny orbit Google.
Ny zavatra lojika indrindra dia ny fieritreretana izany LG dia hanao ny smartphone sy Huawei tablet, bebe kokoa raha raisintsika ny fahombiazan'ny fitaovana Nexus's LG. Fa tsy izany no eritreretiko.
Ary raha raisina ny fahombiazan'ny Nexus novokarin'i LG, dia hafahafa be raha tsy te-hamerina io mpanamboatra io i Google. Fa misy koa safidy hafa izay tsy dia lavitra loatra.
Na dia marina aza fa azo tanterahina tsara fa Huawei dia tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana ny takelaka Google, dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny lento mankany amin'ny tsena ny Nexus mora vidy voalohany.
Imbetsaka isika no naheno tsaho momba ny mety hanombohan'ny Google ny kinova Nexus-ny ary Huawei miaraka amin'ireo mpikirakira HiSilicon Kirin matanjaka Mety ho mpanamboatra nofidina ho azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia afaka nanao ny Nexus manaraka
Malahelo ireo olona mividy azy aho, satria Huawei dia orinasa tsy tompon'andraikitra tanteraka amin'ny mpanjifany.